IStudio yaseCreekside epholileyo--Imizuzu emi-5 Hamba uye eChibini
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguDan & Joyce
Isitudiyo sethu esithandekayo yisuite yabucala ngokupheleleyo kumgangatho osezantsi wembali iWallowa Lake Inn-into eyayikade iyibhedi & nesidlo sakusasa ngoku ziirenti ezi-2 ezahlukeneyo zeeholide. Uya kuyithanda ipatio enkulu yabucala esecaleni komlanjana apho unokufunda khona, uphumle, i-BBQ kwaye ubukele izilwanyana zasendle zijikeleza kwipropathi. Ngaphakathi, uya kuxabisa ikhitshi, ibhedi yokumkanikazi, indawo yokuhlala ene-trundle couch ejika ibe ziibhedi ezimbini kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo-zonke izinto eziluncedo ozifunayo ngelixa ujonga iLake Wallowa.
Isitudiyo saseCreekside sibucala kwaye sikhululekile, sipakisha yonke into oyifunayo kwindawo encinci. Ikumgangatho osezantsi weWallowa Lake Inn, indawo yokurenta iholide eyahlukileyo efanele amaqela amakhulu. Kwi studio ungalindela:
--Ukungena kwakho kumgangatho osezantsi wembali yaseWallowa Lake Inn.
-Ikhitshi enefriji, isitovu sezitshisi ezibini, imicrowave, imbiza yekofu, imbiza yokuqhotsa kunye netoaster ngaphezulu.
--Ibhedi yokumkanikazi yahlulwe kwigumbi lokuhlala
--Igumbi lokuhlala elipholileyo elinesofa enebhedi enokujika ibe ziibhedi ezimbini ezingamawele
--Ibhafu epheleleyo enendlu yangasese, isinki kunye neshawari
-Ipatio enkulu yabucala emiswe ecaleni komlambo, inetafile, izitulo kunye ne-BBQ yegesi
--Ukufikelela kwichibi le-trout ekwabelwana ngayo kunye neyadi
4.63 · Izimvo eziyi-68
Uluntu lwaseWallowa Lake lubekwe emazantsi eentaba zeWallowa kwaye luhleli entloko yeLake iWallowa--ilitye elinqabileyo osibona kwiifoto ezininzi kunye neenkcazo zendawo yethu ekhethekileyo.
IWallowa Lake Inn Patio Suite ibekwe ngokugqibeleleyo kwindawo yomsebenzi. Ukuhamba ngemizuzu emi-3-5 ukusuka ekuhambeni kwaye ngaphakathi kweebhloko ezimbalwa zetram, iWallowa Lake State Park, izikhephe ezinkulu, igalufa encinci, igrosari kunye neentloko zomzila. Awukwazanga ukucela indawo engcono.
Sitsalela umnxeba ngokukhawuleza ukuba ufuna nantoni na okanye unemibuzo. Kuzo naziphi na iimfuno zangoku, iqela lethu elimangalisayo labaphathi beepropathi baya kuba nakho ukukunceda.